Kanto ankehitriny : Fampirantiana etsy amin’ny IFM
13/09/2018 admintriatra 0
Nanomboka ny alatsinainy teo ary tsy hifarana raha-tsy ny 20 oktobra izao. Tanterahina etsy amin’ny « Institut Français de Madagascar » na ny IFM etsy Analakely ny fampirantiana ireo kanto ankehitriny hiarahana amin’ny mpanakanto manodidina …Tohiny
Fanaiky : Maro ireo tolo-tanana
Samy manao izay ho afany. Mbola ao anatin’ny fiantsoana ireo malala- tanana amin’ny fanampiana azy i Fanaiky amin’izao fotoana. Etsy ankilan’izay anefa, mitohy ary misesy ireo hetsika ho tolo-tanana ho an’ity mpanakanto fantatra eo amin’ny …Tohiny
Raharaha Claudine : Afa-baraka ny Bianco
Tsy mitombina ny fiampangana sy ny fanadihadiana notanterahin’ny BIANCO mahakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Taorian’ny fanadihadiana notanterahin’ity rafitra miady amin’ny kolikoly ity mantsy, dia nalefan’izy ireo teny amin’ny PAC na « poles anti-corruption » ny …Tohiny
Kidnapping : Misy mpitandro filaminana
Misy mpitandro filaminana miray tendro amin’ny resaka fakana an-keriny. Ny fakana an-keriny ireo teratany karana tsy nisy fitsaharany teto an-drenivohitra hatrany amin’ny faritra dia saika nahitana fitaovam-piadiana fampiasan’ny mpitandro filaminana avokoa. Tsy mahagaga intsony raha …Tohiny